Yale Smart Keypad - My Home Keyboard - SmartMe
Nahita zavatra isan-karazany tao an-tranoko aho. Nataoko automatique ny jiro, blinds, fanafanana ary nandritra ny fotoana ela dia te ho mandeha ho azy koa ilay hidy. Manana maromaro amin'izy ireo aho, ary nijanona teo am-baravarako ihany tamin'ny farany Linus Smart Lock. Rehefa nilaza tamiko i Yale fa handefa klavier ho ahy izy ireo, dia noheveriko fa tsy maninona, saingy tsy fantatro ny antony ilaiko azy. Ary izao? Mampiasa ny Yale Smart Keypad isan'andro aho ary ny hidin-trano faharoa dia tsy maintsy avy amin'i Linus koa!
Mety manontany tena ianao hoe maninona ny olona no mila keypad eo am-baravarana raha trano tsy miankina izy io. Raha hiresaka trano fandraisam-bahiny hofan-trano isika, dia hazava izany, fa amin'ny tranontsika? Ary mbola eny an-tsena io? Amin'ity famerenana ity dia hasehoko anao fa mbola vahaolana tena mahay izy io. Ny hany zavatra mety hafahafa dia ny fihetsiky ny mpifanila vodirindrina amiko, fa ny ahy kosa dia efa nandalo ny hagagana 😉
Ny Yale Smart Keypad dia… Ny keypad eo am-baravarana
Andao hanomboka amin'ny layout keyboard avy amin'i Yale. Tena ilaina ny refiny. Tena kely ny fitendry (75 mm x 25 mm), saingy somary matevina (23 mm). Tamin'ny fotoana voalohany nahitako azy dia natahotra aho sao hitsangana eo am-baravarana izy.
Na izany aza, hay, nifanentana tanteraka tamin'ny fefy varavarana izy ary toy ny hoe tokony ho eo mandrakizay izy io. Mandra-pahatalanjona ahy ny fahitana azy tsara amin'ny varavarako ankehitriny sy ny fahaizany mifanaraka.
Minimalistic ny klavier, folo fotsiny ny fanalahidy miampy fanalahidy Yale izay manamafy ny fitambarana na manidy ny varavarana. Manjelatra mena ny bokotra rehefa manomboka miditra ny kaody isika. Amim-pahatsorana, malahelo hazavana kely aho eo alohan'ny bokotra voalohany (oh: mampiasa sensor akaiky) ary feo fanamafisana fa nanery ny bokotra izahay. Ny fomba fampiasantsika ny klavier isan'andro dia ho zatra azy io, fa ho an'ny olona izay mampiasa azy voalohany dia mety tsy ho intuitive izany.
Iza koa no mila fitendry?
Mifanohitra amin'ny fisehoana, fanontaniana tena lehibe io. Inona no atao hoe klavier toy izany? Raha manana hidim-baravarana marani-tsaina misokatra sy mikatona irery isika, tena mila an'ity klavijery ity ve isika? Raha manomana lahatsoratra mifototra amin'ny fitaovana azo amin'ny Internet fotsiny aho dia holazaiko aminao fa mety ho fanampiny ho an'ny olona te-hanofa fisaka izany. Fa tsy marina izany. Mampiasa an'ity fitendry ity foana aho amin'ny olona roa monina ao fotsiny.
Ka avelao aho hanomboka amin'ny tranga tsy dia mampiasa clichéd izay tena azo atao. Voalohany indrindra, mandao ny tranoko matetika aho mandritra ny dia fohy. Ao anaty boaty, amin'ny garazy na any amin'ny fanaova-mofo. Tsy mivoaka ivelan'ny distrikan'ny tranoko aho ary mamela ny telefaoniko any an-trano indraindray. Rehefa miala iray minitra aty aoriana aho dia mihidy ho azy ny varavarana.
Raha tsy manana telefaona aho dia handomoka eo am-baravarana aho, na haneno lakolosy mba hosokafan'ny vadiko ho ahy ny varavarana. Noho ny keypad sy ny kaodiko manokana dia afaka manokatra varavarana haingana aho. Ary mifameno tanteraka. Raha miverina amin'ny dia lavitra aho ary mankeny am-baravarana, dia misokatra ho azy amin'ny alàlan'ny Bluetooth izany. Ary rehefa mitsambikina ao anaty boaty mailaka aho ary miverina, dia iny no ampidiriko ilay kaody.
Ohatra iray hafa ny One Touch, izany hoe manidy ny varavarana amin'ny bokotra Yale. Tsindrio fotsiny ny bokotra sy ny hidim-baravarana. Mila mamantatra fotsiny ny fomba hampifandraisana ny One Touch amin'ny seho HomeKit aho. Mampalahelo fa mbola tsy nanampy fanohanana hitsin-dàlana i Yale, noho izany tsy dia tsotra izany. Na izany aza, mandeha ihany.
Yale Smart Keypad amin'ny hofan-trano sy ny fianakaviana
Andao isika hiroso amin'ny tranga fampiasana mahazatra izay namboarina ity hidin-trano ity. Ny Yale Smart Keyboard dia mifandray amin'ny hidin-tranonkalantsika amin'ny alàlan'ny fampiharana Yale Access. Eto no ampiarahanay izy io ary afaka mifehy azy isika. Ny fampifanarahana azy amin'ilay rindrambaiko dia mamela antsika hiasa maro.
Voalohany, afaka mamorona kaody vahiny isika. Amin'izany no ahafahantsika mamela olona iray hiditra ao amin'ny trano fonenanay indray mandeha, na hamorona kaody izay hiasa mandritra ny andro maromaro. Yale aza dia manana fampidirana AirBnb, koa raha manofa ny trano fonenanao ianao amin'izany dia tena mendrika ny hodinihina.
Ny tombony dia mamorona kaody ho an'ny tompona trano tsirairay ihany koa. Amin'izany fomba izany dia manana ny ahy aho, izay mora tadidiko, ary i Magda manana ny azy. Ary noho ny safidy fampandrenesana dia fantatro rehefa miditra amin'ny trano fonenana izy, ary fantany rehefa miditra aho.
Mandeha fotsiny izany
Ity keyboard kely ity dia nanjary vahaolana tsy maintsy ananana ho ahy ary amin'ny alalany ny lakile faharoa amin'ny varavarana dia tokony ho i Yale ihany koa. Yale Smart Keypad dia fampivoarana tonga lafatra ny hidin-trano Yale maranitra! Ny tahotra rehetra fa ho adinontsika ny telefaonintsika aorian'ny handaozantsika ny trano dia hanjavona rehefa apetraka eo am-baravarana ity keypad kely ity. Ary ny zava-misy fa mifanaraka tsara amin'ny varavarako dia manamarina ny finoako fa nahita ny vahaolana tonga lafatra ihany aho.